जहाँ छौं त्यहीँबाट नै दसैं मनाउ! - Bichar news - Nepali Online News Portal
जहाँ छौं त्यहीँबाट नै दसैं मनाउ!
Headline, मुख्य खबर, समाचार, संस्कृति, स्वास्थ्य
काठमाडौं। बडादसैँको मुख्य विशेषता भनेको पारिवारिक जमघट हो। र, यतिबेला कोरोना महामारीको जोखिम उच्च विन्दुमा पुगेको छ। फेरिपनि मानिसहरू परिवारसँगको भेटका लागि यात्रामा निस्कन थालेका छन्।
यसले सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने चिन्ता थपिएको छ। दसैँ भन्नेबित्तिकै धेरैका मनमा आउने एउटै कुरा हो, पारिवारिक जमघट, मीठो परिकार खाने, नयाँ लुगा लगाउने र रमाइलो गर्ने।
कोरोना महामारीको बीच पनि धेरै व्यक्ति आफ्नो परिवारलाई भेट्न घर जान सुरु गरिसकेका छन्। बजारमा पनि केही भिड देख्न सकिन्छ। तर, त्यो अहिलेको अवस्थामा भने घातक सावित हुनसक्छ।
काठमाडौंमा बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणमा आउने संकेत नदेखिँदा देखिएको भिडभाडले आगामी दिनमा अझ जोखिम बढ्ने खतरा देखिएको छ। व्यक्ति दसैँ मनाउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण बोकेर हिडिँरहेको समेत हुनसक्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलेसमेत ‘स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौँ, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऔं’ भने नारासहित सूचनाहरूसमेत सम्प्रेषण गर्न थालेको छ। भिडभाड, सभा-सम्मेलनबाट नै संक्रमण फैलने जोखिम भएकाले यस वर्ष ‘जहाँ छौं, त्यहीँबाट नै दसैँ’ मनाउन आग्रह गरेको छ।
दसैँको समयमा किनमेलसमेत निकै हुने गर्छ। जसका कारण पनि कोरोना सर्ने जोखिम उत्तिकै हुने भयो। दसैँको समयमा मासुजन्य सामग्री निकै प्रयोग गरिने गरिन्छ ।
जसमा पनि हामीले ध्यान नदिने र मात्रा नपुर्‍याइकन खाने, सुरक्षा नअपनाउने हो भने त्यसले थप अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ। जसका कारण अहिलेको समयमा सबै सतर्क हुन आवश्यक छ।
सङ्क्रमणको बढ्दो रफ्तार कहिले नियन्त्रण हुने कुनै टुंगो छैन । झन् चाडपर्वको माहोल सुरु भएसँगै यसले बढाउने जोखिमको सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा नै गइसकेको र जोखिम वर्गमा समेत पुगेकाले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
- १ कार्तिक २०७७, शनिबार १९:१५ मा प्रकाशित